Deadline Day: Liiska Heshiisyada Maanta Dhacaya Oo Ah Maalintii Ugu Danbeysay Ee Suuqa Kala Iibsiga
Iyadoo Suuqa Kala Iibsiga uu maanta xirmayo islamarkaana bisha Janaayo ay dhamaad tahay, waxaan halkaan idin kugu soo gudbin doonaa ciyaartoyda sida rasmi ah loogu kala wareegay horyaalada ugu waa weyn qaarada Yurub.
Liiska hoose waa heshiiska la dhameystiray islamarkaana la xaqiijiyay. Mar walba soo booqo bogaan si aad u la socoto wixii ku soo kordha madaama aan mar walba update ku sameyn doono ilaa iyo inta uu suuqa furan yahay.
Chris Samba (Anzhi to QPR, 12.5 milyan ginni)
Urbe Emmanuelson (AC Milan to Fulham, amaah)
Paul Scharner (Hamburg to Wigan, amaah)
Robert Acquafresca (Bologna to Levante, amaah)
Diego Buonanotte (Malaga to Granada, Lacagta lama shaacin)
Alexandru Maxim (Pandurii Targu-Jiu to Stuttgart, lacagta lama shaacin)
Adrien Rabiot (PSG to Toulouse, amaah)
Xavi Hernandez: Real Madrid Waa Ay Inaga Baxsatay Xalay
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Xavi ayaa ka hadlay sida uu uga xun yahay natiijada ay kooxdiisa ka heshay lugta hore ee semi-finalka Copa del Rey, isagoo sheegtay in Blaugrana ay ay ciyaarta oo dhan heysatay.
Cesc Fabregas ayaa furay goolasha ka hor inta uusan Raphael Varane ka caawin Blancos inay ciyaarta ka dhigaan barbaro 1-1 ah.
“Waxaan u ogolaanay inay baxsadaan. Waxaan qabaa inaan aheyn kooxda fiicneyd, ciyaarta anaga ayaa heysay, waxaana abuurnay fursado badan. Waa dareen qariib ah.” ayuu yiri Xavi sida uu u sheegay website-ka kooxdiisa.
“Waxaan abuurerynay fursado badan ciyaarihii Clasicos ee u danbeeyay, laakiin shabaqa si sax ah uma aanan taaban. In goolal la dhaliyo ayaana muhim ah.
“Wax walba weli waa ay furan yihiin. Sheeko tan la mid ah ayayna noqon doontaa lugta labaad, laakiin waxaa isku dayi doonaa inaan saameyn intaan ka badan yeelano.”
Lugta labaad waxa ay dhici doontaa 27ka Febraayo.
Dani Alves Oo Sheegay In Taageerayaasha Real Madrid Ay Cunsuriyad Kula Dhaqmeen
Faalo: Raphael Varane Oo Magac Ku Sameystay Kulankii El Clasico Ee Barbaraha Ku Dhamaaday.
Waxa ay aheyd ciyaar tayo iyo farsamo fiican lagu soo bandhigay iyadoo ay ku tartamayeen weeraryahanada ugu fiican adduunka oo shaqadooda qabsanayay. Laakiin lugta hore ee semi-finalka Copa del Rey waxaa si gaar ah loogu xusuusan doonaa qaab ciyaareedkii wanaagsanaa ee da’ yarka Raphael Varane, kaasoo kaliya aan ka saacidin barbaraha Real Madrid laakiin sidoo kale magac ku sameystay kalankaan daafac ahaan.
Ciyaaryahanka reer France ayaan kursiga keydka hada ka hor u soo dhaafin kulankaan El Clasico, waxaana fursadii uu helay haatan uu ku soo bandhigay awooda uu u leeyahay inuu kaga dhex muuqdo kulanka ugu adag kubada cagta adduunka iyo ciyaarta ugu cadaadiska xun.
Varane ayaa ka qeyb qaatay meel walba 90 daqiiqo oo uu ciyaar wacan soo bandhigay, hadii aysan taas ku filneyna waxa uu dhaliyay goolkii barbaraha ee ka dhigtay in lagu kala baxo kulanka Camp Nou afar isbuuc ka dhici doona ee lugta labaad.
Ka qeyb qaadashadiisa sarre iyo xawaarihiisa, 19 jirkaan ayaa asturay qalad uu sameeyay daafaca qibrada leh Ricardo Carvalho isagoo ciyaarta ku hayay barbaro 0-0 ah qeybtii hore, ka dib markii kubad uu Xavi goolka la abaaray oo gool loo fishay uu ka celiyay xariiqda goosha.
Hadana, waxaa jiray taakalkaas xusuusta leh ee uu ciyaaryahankii goolka u dhaliyay Barca Cesc Fabregas kaga beeniyay inuu 2-0 ciyaarta ka dhigo.
Xitaa waxa uu fursad ka beeniyay ciyaaryahanka sannadka adduunka. Iyadoo Lionel Messi uu kubad la soo galay xerada ganaaxa, islamarkaana inta badan daafacyada Madrid ay u muuqdeen kuwa aan celin karin, laakiin Varane ayaa soo galay oo taakal kale oo wanaagsan kubada kaga bixiyay xiddiga reer Argentina. Laakiin hadana weli howshiisa halkaas kuma dhamaan.
Iyadoo ciyaarta ay 9 daqiiqo dhiman tahay, waxa uu ku soo afmeeray kulankiisii ugu horeysay ee El Clasico gool barbaro ah oo qiimo aan la siisto laheyn. Ka dib kubad ka timid Mesut Ozil ciyaaryahankii hore ee Lens ayaa ka dul kacay daafacyada Barcelona islamarkaana kubad madaxa ku dabamariyay goolhaye Pinto.
Qaab ciyaareed sidaas weyn abaalmarin la’aan ma socon karto. Haatan Jose Mourinho wax uu ka yiraahdo ayaaba yar madaama daafacyadiisa dhaawac iyo ganaax ku kala maqnaayeen. Laakiin marka Pepe iyo Sergio Ramos soo laabtaan, waxaa u yaala in go’aan weyn uu gaaro.
Real Madrid Iyo Barcelona Oo Isku Garab Dhacay Lugta Hore Ee Semi-finalka Copa del Rey
Goolal ay kala dhaliyeen qeybtii labaad ee ciyaarta Cesac Fabregas iyo Raphael Varane ayaa keentay in kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay ku kala baxaan barbaro 1-1 ah lugta hor eee semi-finalka Copa del Rey, ciyaar xiiso leh oo ka dhacday Santiago Bernabeu.
Fursadii ugu qatarsaneyd ee ugu horeysay waxaa heshay kooxda Barcelona daqiiqadii 21aad markii laad xor ah uu tuuray Xavi ay birta ka beenisay iyadoo goolhaye Diego Lopez lagu diray kubadaas.
3 daqiiqo ka dib Barca ayaa u dhawaatay mar kale inay hogaanka qabato Carvalho ayaa qalad daafac sameeyay waxaana kubad uu soo tuuray xariiqda goolka ka badbaadiyay Rapheal Varane.
Daqiiqadii 26aad ayaa Real Madrid ay iyadana soo martay fursad qaali ah, Ronaldo ayaa kubad u dhex bixiyay Benzema, laakiin dadaalkiisii waxa ay keentay inuu kubada shabaqa gees kaga dhufto.
Labada kooxood ayaana ciyaaray kubada fiican oo weerar ah, iyadoo Real Madrid ay u babac dhigtay weerarada Barcelona iyadoo uu ugu wacnaa daafacooda da’ yar Varane kaasoo si wacan uga dhex muuqday ciyaarta waxaana ay qeybtii hore ku kala nasteen barbaro goolal la’aan ah.
Labo daqiiqo markii ay socotay Real Madrid ayaa heshay fursad fiican markii kubad ay iska lumiyeen Barcelona, Ozil ayaa helay oo quudiyay Benzema kaasoo goolka korkiisa si ciriiri ah kubad ku dulmariyay.
Daqiiqadii 50aad ayaana Barcelona ay hogaanka u qabatay ciyaarta, kubad uu iska bixiyay Callejon ayaa waxaa ninka Fabregas u jiheeyay Messi kaasoo si sahlan u dhameystiray islamarkaana ciyaarta ka dhigay 1-0 oo Barcelona ay hogaanka ku qabatay.
Daqiiqadii 60aad ayayna Real Madrid heshay fursad qaali ah, Essein ayaa kubad ka soo dhigay dhanka midig waxaana kubada madax la helay Ronaldo laakiin si ciriiri ah ayay goolka ku hareermartay.
Labo daqiiqo ka dib Dani Alves ayaa waxaa fursad ka badbaadiyay goolhaye Diego Lopez oo ay u tahay kulankiisii ugu horeysay tan iyo markii uu ku soo laabtay Real Madrid.
Daqiiqadii 66aad Real Madrid ayaa mar kale ku dhawaatay inay shabaqa soo taabato kubad ayaa la soo soo dhigay xerada ganaaxa, Ronaldo ayaana u muuqday mid goolka dhalinaya laakiin Gerard Pique si fantastik ah u difaacay.
Seddex daqiiqo ka dib Fabergas ayaa ku sigtay inuu dhaliyo goolkiisii labaad, Alves ayaa firaaqo ku helay dhanka midig waxaana baas u soo dhigay Fabregas oo xerada ganaaxa ku jiray, laakiin darbadiisa ayaa dulmartay goolka inkastoo uu goolka agtaagnaa.
Real Madrid ayaana goolka barbaraha heshay daqiiqadii 81aad markii karoos uu soo dhigay Mesut Ozil uu madaxa la helay Raphael Varane kaasoo aan fursad siinin goolhaye Pinto. 19 jirkaan oo ciyaarta si wacan uga dhex muuqday ayaana dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka.
Barcelona ayaana u soo dhawaatay inay goolka guusha hesho daqiiqadii 88aad markii Jordi Alba kubad loo soo qaaday waxaana darbadiisa xooganeyd badbaadiyay goolhaye Diego Lopez. Halka Ilbiriqsayadii u danbeeyay ay fursad heshay Real Madrid lakiin kama aysan faa’ideysan.
Ciyaar xiiso badneyd ka dibna labada kooxood waxa ay ku kala baxeen barbaro 1-1 ah lugta hore ee semi-finalka Copa del Rey, iyadoo lugta labaad ee ka dhici doonta Camp Nou lagu kala bixi
Arsenal Oo Isku Daygeedii Ugu Danbeeyay Ugu Dhaqaaqeysa Soo Xerogelinta David Villa.
Madaxda Arsenal ayaa kulan ku yeeshay xarunta tababarka kooxda iyagoo ka arinsaday sidii bishaan Janaayo oo ilaa iyo haatan Arsenal aysan waxba la soo wareegin ay uga dhigi lahaayeen mid miro dhal ah, sida ay qortay Daily Mail.
Gunners ayaana ilahooda wadaxaajoodka oo dhan waxa ay ku howlgelinayaan inay isku dayaan inay soo xerogeliyaan David Villa ka hor inta uusan suuqa kala iibsiga xirmin khamiista.
Daily Mail ayaa ogaatay in madaxa kooxda Ivan Gazidis uu tagay xarunta tababarka kooxda ee London Colney isniintii isagoo wadahadalo la lahaa Arsene Wenger waxaana ay isla dejiyeen qaacido ay uga faa’ideysan lahaayeen saacadaha ka haray suuqa kala iibsiga.
Gazidis ayaa ogeysiiyay Wenger in kooxda ay ku guuldareysatay inay hesho xiddigihii diirada u saarnaa. Waxaana haatan jira ifafaalo isa soo taraya oo ku aadan in Arsenal aysan waxba la soo wareegi doonin bishaan, islamarkaana lacagtooda ay u dhigan doonaan xagaaga.
Arsenal ayaa weli rajo ka qabta inay la soo wareegto weeraryahanka Barcelona David Villa, inkastoo Wenger uu shalay sheegay in Barcelona aysan dooneynin inay iska iibiso.
Gunners ayaa dalab u gudbin doonta Barca 24ka saacadood ee soo socda si ay Emirates u keenaan Villa, kaasoo isagana la fahasam yahay inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Arsenal.
Ronaldo Oo Hal Jaale U Jira Inuu Seego Kulanka Lugta Labaad Ee Semi-finalka Copa del Rey Ee Barca.
Cristiano Ronaldo ayaa cabsi dhanka jaalaha ah qaba isagoo hal jaale u jira inuu seego kulanka luga labaad ee semi-finalka Copa del Rey.
Koobka Copa del Rey seddex jaale oo aad qaadato seddex ciyaar waxa ay keeneysaa inaad maqnaato hal kulan, Ronaldo ayaana durbaba tartankan Copa del Rey qaatay labo jaale, tababare Mourinho ayaana taas maanka ku heyn doona kulanka caawa inuu is ilaaliyo xiddigiisa.
Hadii caawa garsooraha uu jeebkiisa gacanta geliyo islamarkaana qorto numberka Ronaldo, Real Madrid waxa ay weyn doontaa hantideeda ugu weyn lugta labaad ee Camp Nou.
Waxa uu Ronaldo shabaqa soo taabtay 20 kulan xilli ciyaareedkan, 15 ka mid ah 20kaas kulan waa ay badiyeen, taasoo ah boqolkiiba 75. Wadar ahaan waxa uu Los Blancos u dhaliyay 179 gool 176 kulan oo uu u saftay.
SS Lazio Oo Juventus Ku Reebtay Semi-finalka Coppa Italia Una Gudubtay Finalka.
Kooxda Lazio ayaa u gudubtay finalka Coppa Italia ka dib markii ciyaar cajiib aheyd ay 2-1 kaga badiyeen lugtii labaad ee semi-finalka kooxda Juventus.
Lugtii hore oo ay labadan kooxood ku kala baxeen barbaro 1-1 ah ayaa waxa ay ka dhigeysaa in Lazio ay kaga talaabsatay wadar ahaan labada lug 3-2 kooxda Bianconeri.
Ciyaarta caawa ayaase aheyd mid ilbiriqsiyo isku bedeshay, Lazio ayaa hogaanka ciyaarta qabatay daqiiqadii 53aad markii Gonzalez uu u dhaliyay gool, waxaana ay ciyaarta ku socotay inay 1-0 ku dhamaaneyso laakiin Arturo Vidal ayaa daqiiqadii 90aad barbareeyay ciyaarta oo u maleynayay in 30 daqiiqo dheeri ah la isla aadi doono.
Laakiin taas waxaa diiday oo ilbiriqsiyadii u danbeysay madax kubad shabaqa ku geliyay Floccari isagoo goolka guusha u dhaliyay kooxda Lazio oo marti loogu ahaa Stadio Olimpico.
Lazio ayaa haatan waxa ay finalka la ciyaari doontaa midkood Roma ama Inter bisha May.
Ozil: Real Madrid Ma Ahan Koox Hal Ciyaartoy Qura Ah
Ciyaaryahanka kooxda Real Madrid Mesut Ozil ayaa ka soo horjeestay muhiimada uu leeyahay Cristiano Ronaldo iyadoo kooxdiisuna isu diyaarinayso kulanka ay la ciyaarayaan Barcelona.
Kooxda ka dhisan caasimada dalka Spain ayaa martigelinaysaa Blaugrana lugta koowaad ee ciyaarta semi-finalka Copa del Rey berrito, waxana uu Ozil uu sheegay inay tahay in koox ahaan ay u guuleystaan haddii ay doonayaan in ay ka badiyaan kooxda Camp Nou.
“Waan ognahay dhammaanteen heerka uu joogo Cristiano,”ayuu u sheegay Bwin. “Waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu fiican caalamka marwalbana waxa uu u soo bandhigaa muhiimadiisa kooxda.
“Laakiin, waxaan nahay koox ee ma ihin Cristiano kaliya ama ciyaaryahan kalaba. Waa inaan u shaqeynaa koox ahaan haddii aan dooneyno inaan guuleysano.
“Waan ognahay in Barcelona ay tahay koox adag oo ciyaaryahano waaweyn ay u ciyaaraan, laakiin waa inaan annaga kooxdeena xoogga saarnaa.
Ozil oo sii hadlay ayaa yiri:“Waxaan ku ciyaaraynaa garoonkeena hadafkeenuna waa in aan kulanka guuleysano.
“Waa kulanka ugu weyn caalamka waana ciyaar aad u xamaasad badan oo mudan in la ciyaaro”
Kooxda Manchester City Oo Taako Kala Kulantay Kooxda Ugu Hooseysa Horyaalka Ingariiska Ee QPR.
Kooxda difaacaneysa horyaalka Ingariiska ee Manchester City ayaa taako kala kulantay kooxda ugu hooseysa horyaalka ee QPR ka dib markii ay ku kala baxeen barbaro goolal la’aan ah.
Kulanka labadan kooxood ayaa had iyo jeer waxa uu xusuus u yahay kulankii ugu danbeeyay xilli ciyaareedkii hore ee daqiiqadii ugu danbeysay ay Manchester City guusha ka gaartay QPR islamarkaana ku qaaday horyaalka Ingariiska.
Kooxda martida aheyd ee Sky Blues ayaa ciyaarta inteeda badan heysatay waxaana ay abuureen fursado badan, oo ay ku jirto kubad birta ay ka beenisay, laakiin kama aysan faa’ideysan fursadahooda.
Waxaana ay taasi dhalisay inay dhibic kaliya ka helaan safarkii ay ku tageen Loftus Road, oo ay taako kala kulmaan kooxda ugu hooseysa horyaalka ee QPR.
Natiijadan ayaa waxa ay ka dhigeysaa in Manchester City ay leedahay 52 dhibcood islamarkaana afar dhibic u jirto kooxda hogaanka heysa ee Manchester United, laakiin Manchester United ayaa fursad u heysata inay hogaankooda ka dhigtaan 7 dhibcood hadii ay habeen danbe ka badiyaan kooxda Southampton.
QPR ayaa iyagana weli baaqi ku sii ah kaalinta ugu hooseysa horyaalka iyagoo leh 16 dhibcood 24 kulan oo ay ciyaareen